Imibono engama-7 yangemuva kwesidlo sasebusuku ye-Espresso Yokuphaka Ngamaholide - Ukudla
Imibono engama-7 yangemuva kwesidlo sasebusuku ye-Espresso Yokuphaka Ngamaholide
7 After Dinner Espresso Ideas Serve Over Holidays
I-FYI: Amaphathi okudla kwakusihlwa anehora legolide, futhi. Kulula okokugcina lapho wonke umuntu egcwele, ejabule futhi egcwele ingxoxo.
Icebo lokugcina lowo mlingo uqhubeka? I-Espresso. Ngosizo lwabapheki abambalwa nabadayisi siqoqe iziphuzo eziyisikhombisa zangemva kokudla, konke sisebenzisa Amaphilisi we-Peet’s Espresso , eletha inkomishi enambitheka kakhulu nge-crema ecebile iqonde ngqo kusuka eNespresso®umshini. Zilungiselele ukuletha impilo entsha etafuleni lakho.
Shaya i-Espresso Mocha
Ukwenza i-mocha yangokwezifiso kuzo zonke izivakashi kubukeka kumangalisa, kepha kuthatha umzamo ocishe ungabi nalutho. Lesi siphuzo esifudumele sinezithako ezimbili nje kuphela — kanti esinye saso ushokoledi ongamanzi. Amaholide amahle impela.
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani: Khetha okuthandayo Inhlanganisela ye-Peet’s Espresso capsule bese ulungisa ozokuphaka. Ngalokhu, siyayithanda i-Ristretto ebushelelezi, eletha ukunambitheka okugxile kwe 'espresso emfushane (okusho ukuthi i-barista isebenzise amanzi amancane, ngokungafani ne-lungo, noma ukudonsa okude). Lungisa ikomishi loshokholethi oshisayo njengoba uthanda bese uthela i-espresso.
Hlanganisa i-Espresso Martini
I-espresso martini iyi-classic, kusho uJames Urycki, isazi sokuxuba ku I-Travelle Kitchen + Indawo yokuphuzela utshwala eChicago. Yigcine ilula futhi ugweme ukhilimu. Le iresiphi ihlanganisa kahle ukuthi i-espresso martini kufanele ibe yini: icebile futhi inesibindi.
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani: Ku-shaker, hlanganisa i-vodka efakwe i-vanilla engu-1.5 ounces (ungazenzela ngokulahla ubhontshisi owodwa we-vanilla ebhodleleni le-vodka emasontweni amabili ngaphambi kwephathi yakho), isibhamu esisodwa se-fresh I-Espresso kaPeet , Ama-ounces ama-0.5 we-liqueur yekhofi (Urycki uphakamisa ISt. UGeorge NOLA ) kanye ne-1 isipuni se-demerara isiraphu. Shake ngamandla amasekhondi ayi-10 noma ayi-15, bese ungena engilazini yesigqebhezana bese ukhonza. Ufuna ukuzamazama kahle ngokwanele ukuze uvuselele uketshezi, oluzokwakha ungqimba lwe-foam oluncibilikile olubushelelezi ngaphezulu kwe-cocktail lapho ungena engilazini yakho yokuhlangana.
Noma, Yenza i-Boozy Espresso Shot
U-Amaro, ugologo ongumNtaliyane obabayo, uyindlela emnandi yokuphonsa isibhamu se-espresso ngenkathi uhlala esihlokweni. U-Aaron Paul, umqondisi wesiphuzo wezindawo zokudlela ze-Alta Group - kufaka phakathi Ama-Adams aphezulu endaweni yaseLos Angeles yaseWest Adams - udale le recipe, ayiqambela iShot in the Dark.
Nakhu ukuthi ungenza kanjani amashothi amabili we-espresso : Esigungwini esineqhwa, hlanganisa: ama-ounces ama-2 i-vanilla vodka (uPaul usikisela IGrey Goose La Vanille ), Ama-servings ama-2 asanda kwenziwa I-Espresso kaPeet , 0.5 ounces of liqueur coffee (UPaul uphakamisa uMnu Black), u-0.5 ounces wobisi lonke, ama-ounces e-chocolate liqueur (UPaul usikisela Meletti Chocolate ) nama-ounces U-Averna Amaro . Shake ngamandla. Hlunga kabili ube izingilazi zokudubula.
Yenza lula i-Dessert ngokukhonza i-Affogato
Igama eliwubukhazikhazi lika-ayisikhilimu elixubene ne-espresso, i-affogato lonke lisezulwini njengoba kuzwakala
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani: Khetha bese ulungiselela okuthandayo Inhlanganisela ye-Peet’s Espresso capsule . Faka u-ayisikhilimu omkhulu we-vanilla engilazini ebandayo. Thela i-espresso phezu kwe-ayisikhilimu ngaphambi kokuphaka. Phezulu ngokufafaza amantongomane aqoshiwe noma ikhasi le-citrus.
Yenza i-Espresso Shake
I-CREAM , i-ice-cream-sandwich shop edlalwayo enezindawo eColorado, eCalifornia, eNevada naseFlorida, isebenza ngokunyakaziswa kwe-caramel macchiato okumemeza kakhulu iqembu. Umsunguli obambisene naye uGus Shamieh uphakamisa ukuyifaka ngosawoti ophehliwe, i-caramel-sauce drizzle kanye ne-cherry-kufana nomnsalo omuhle ngaphezulu kwalokho okwakuvele kuyisipho esiphelele.
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani: Ku-blender, hlanganisa ama-scoops amathathu we-ice cream oyithandayo, & frac14; ubisi lwenkomishi, ama-servings ama-2 asanda kulungiswa I-Espresso kaPeet nokukhama okunomusa kwe-caramel sauce. Thela engilazini ende.
Iya (Undercover) Unempilo nge-Mousse ye-Avocado-Espresso
Ukotapeya, ushokoledi ne-espresso? Yebo, impela! Le dessert ebulalayo efaka amafutha amahle ngaphandle kobisi noma isisindo, ukuze ukwazi ukwamukela zonke izivakashi zakho, kusho umpheki uMaria Ibrahim, umbhali we Incwadi Yokudla Ehlanzekile kanye nomsunguli weGrow Green Industries, inkampani enikela ngezixazululo ze-eco zokuphepha kokudla.
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani: Sebenzisa isipuni ukukha inyama kusuka ku-avocado 1 enkulu, evuthiwe, bese uyihlanza ku-processor yokudla kuze kube bushelelezi. Faka inkomishi engu-cocoa eluhlaza, i-1 esanda ukwenziwa I-Espresso kaPeet i-capsule, inkomishi yekhwalithi enhle ye-granulated stevia noma i-monk yezithelo ezikhishwe namaconsi ama-2 amafutha ka-orenji amsulwa abuye adonse futhi aze ahlanganiswe ngokuphelele futhi abushelelezi. Faka isipunu ezingilazini bese uzipholela okungenani ihora elilodwa ngaphambi kokuphaka. Phezulu ngama-raspberries, ama-blueberries, ama-alimondi ashelelisiwe, ukhilimu ophehliwe omusha noma ukhukhunathi osikiwe.
Khonza i-Espresso Eqondile, Indlela Efanele
Ngenkathi ngihlala e-Italy, ngasheshe ngaqonda ukuthi i-espresso enhle iyinkolo, kusho u-Ibrahim. Awekho amamenyu wohlu olude. Ayikho i-ventis, i-trentis noma ama-combos okunambitheka okunzima. Isiphuzo nje esihlanzekile, esimnyama futhi esinamandla. Izivakashi zakho zizoyithokozela le nkulumo eqondile, yase-Italy.
Nakhu ukuthi ungayenza kanjani (ngendlela eyiyo): Okokuqala, phakela isivakashi ngasinye ingilazi encane yamanzi akhanyayo ukuze uhlanze ulwanga lwaso. Khonza ikhwalithi ephezulu I-espresso kaPeet enkomishini yedemasasse enesipuni esincane kanye namashubhu ambalwa kashukela kanye noqweqwe lukalamula ohlangothini. Uma i-espresso yakho yenziwe kahle, kuzobukeka sengathi kukhona ukhilimu ogcwala ebusweni - onjengegwebu elikhilimu kubhiya. Idalwe ngamandla okusika kwamanzi nge-espresso, futhi ibizwa ngokuthi ‘i-crema,’ yize kungekho bisi ku-espresso yakudala. Kuyasiza ukugcina ukunambitheka kungaphakathi. Tshela izivakashi ukuthi zilandele ukuhola kwakho futhi zincibilike ikhabhu elilodwa noma amabili kashukela ku-espresso eshisayo ngomhlane waleso sipuni esihle. Bangakwazi ukulahla i-rind ku-espresso yabo ukuze banciphise ukunambitheka nge-asidi, noma ukuhlafune ngemuva kokuqeda. Uma uzizwa umuhle, khipha ipuleti elincane le-amaretti noma i-biscotti, kanye nenduku kashukela edwaleni ukuze unyakazise esikhundleni sesipuni.
ikhambi elingcono kakhulu lemvelo lenkwethu
ukusetshenziswa kwe-vaseline izinwele
hollywood igama lama-movie wothando
ukuthi ungazivikela kanjani izinwele zakho ekuweni kwezinwele